Dadka toogashada u dhinta magaalada Stockholm oo kordhay - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Ilaa iyo bishi Oktoobar sannadkan ayey 12 qofi ku dhinteen Stockholm ka dib markii la toogtay. sawir: Tomas Oneborg/SvD/TT
Dadka toogashada u dhinta magaalada Stockholm oo kordhay
La daabacay onsdag 15 november 2017 kl 15.03
Tirada qof ee lagu toogto magaalada Stockholm ee dabeetana u dhinta dhaawaci halkaas ka soo gaadhay ayaa ugu sareeya dalkan marka loo eego inta qof ee halkaas ku nool. Tan ayaa ka dhigan in ay magaalada Göteborg dhaafeen.
-Stockholm waxeey hadda dhaaftay magaalada Göteborg, ayuu sheegay Sven Granath oo arrimahan baadhay kana hawlgala boliiska magaalada Stockholm.
Ilaa iyo bishi Oktoobar sannadkan ayey 12 qofi ku dhinteen Stockholm ka dib markii la toogtay. Tiradan ayaa ka badan magaalada Malmö oo todoba lagu dilay iyo Göteborg oo lagu dilay saddex qof sannadkan.
Sven Granath ayaa filaya in kor u kacani xidhiidh la leeyahay in hubka sharci darroda ahi ku soo kordheen bulshada wakhtigii ugu dambeeyay.
Xitaa dembilayaasha ayaa caddeeyay in gacan ku dhiga hubku sii fuduudaaday. Mid ka mid ah kuwan ayaa ah Karim oo dhowaan ka baxay kooxahan.
-Hubka meel kasta ayaa laga heli karaa . Bastooladii waxaa lagaa siinaya 20 000 oo koroon. Waxaa igu filan in aan saxiibkeeyga waco, sentarka ayaan ku kulmayna, dabeetana hubka ayuu gacanta iga saaraya, ayuu sheegay Karim.